froggyads.com | Yakavanzika Mutemo
Dzokera kune froggyads.com
DZVANYA PANO KUTI USHANDure YAKO YAKO YAKO YAKO YEMAHARA
EZOIC BASA REMAHARA POLICY
froggyads.com ("Webhusaiti") inoshandisa tekinoroji yechitatu inonzi Ezoic.
Ruzivo PAMUSORO PENYU DZESANGANO NEWEBSITE
Ezoic yakazvipira kuchengetedza kuvanzika kwako. Isu tinongoshandisa chete ruzivo rwatinounganidza zviri pamutemo zvichienderana neGeneral Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679).
Mabasa makuru aEzoic ndeaya:
Yedu yekuchengetedza mutemo inovhara Ezoic Inc., Ezoic Limited uye iyi Webhusaiti:
6023 Innovation Nzira, Carlsbad, California, United States
Northern Design Center, Abbott's Chikomo, Gateshead, NE8 3DF United Kingdom
Kuti tipe zvigadzirwa zvedu nemasevhisi nerutsigiro rwakanangana, zvakafanira kuti Ezoic ichinjise dhata rako kunze kweEuropean Union. Mukudaro, iyo data controller yeiyi data yevagari veEU ndeyeEzoic Inc. ine mahofisi akanyoreswa pa6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States. Yese mibvunzo yezvikumbiro zvine chekuita nekugadziriswa kwedata inogona kunge iri kero kune data@ezoic.com
KUPIZA VISITORI UYE ANONYMOUS ACCESS
Kana iwe usingabvumiri kuunganidzwa kwakadaro, iwe unogona kuwana webhusaiti iyi pasina kuburitsa data rako pachako.
YEKUTI KUSANGANYA KUSVIKIRA
Ezoic inonyora data nezve vanhu uye traffic kune ino webhusaiti. Ezoic iyi webhusaiti inogumira mumiririri (uye mutongi wedata mumamiriro eEU) nechinangwa chekupa data reInternet uye nemasevhisi ekuvandudza. Ezoic inogona kushandisa iyi data kuvandudza sevhisi yayo kana kugonesa mamwe masevhisi (semuenzaniso, kushandisa vashanyi matanda emigwagwa kana data rakatumirwa kuburikidza neshumiro yekuvandudza mashandiro emamwe mawebhusaiti).
Ezoic inogona kuunganidza ruzivo rwomunhu sezvarunotsanangurwa muGDPR (senge IP kero uye id yakasarudzika cookie) nezve vashanyi kune webhusaiti yako nekuda kwehuwandu, analytics uye kusarudzika. Uye zvakare, Ezoic inoshanda nemapoka matatu echitatu kuunganidzwa nekuchengetedza dhata nekupa analytics uye yekushambadzira masevhisi.
Kushandiswa kweRuzivo Rwevanhu
Type (s) yeData
Zviri pamutemo hwaro hwekugadzirisa
Kuvandudza ruzivo rwevashandisi
Ruzivo rwako runotibatsira kuti tikupe iwe inonakidza, inoshanda chiitiko pane ino webhusaiti iyo inogona kuve yakagadzirirwa maitiro iwe kana vamwe mapindura kune zvemukati uye kushambadza pane izvi kana mamwe mawebhusaiti.
Kuvandudza mashandiro echiitiko
Ruzivo rwako runotibatsira kukwezva kuiswa, saizi, nguva uye huwandu hweshambadziro dzinoratidzwa kwauri. Izvo zvinotigonesa kuita smart sarudzo inobatsira ino muridzi webhusaiti kuwana mari asi ichideredza kukanganisa kweanoshambadza pane chako chiitiko.
Kugadzirisa kusikwa kwemukati
Ruzivo rwako runotibatsira kudzidza izvo zvemukati zvaunofarira nezvazvo uye kunakidzwa uye, maitiro ezvemukati zvaunofarira nezvawunoita zvakanyanya. Izvi zvinotibatsira kugadzira zvakawanda zvemukati uye maficha aungade.
Kuvandudza mashandiro ewebhusaiti
Ruzivo rwako runotibatsira kuyera mitanho yekuita dzakasiyana nezve yedu saiti, senge sosi yekumhanyisa, kuitira kuti tigokwanisa kuvandudza mashandiro anoitwa saiti ino.
KUTSVIRA KUSAKA uye KUTENDA
Tichagadzirisa dhata yatinotora nezvako kuti tikugadzirise kushanda kweizvi nemamwe mawebhusayithi. Ruzivo urwu runotibatsira kuita zvisarudzo pamusoro pekuti ndezvipi zviratidziro kuratidza, maumbirwo, dhizaini, hukuru uye kuisirwa kushambadzira uye kuti zvinyorwa zvinofanirwa kuendeswa sei kune vamwe. Ruzivo urwu rwunoshandiswazve kuongororwa kwekuita nekubika.
KUSHANDISA KWEMAHARA ZVIRO
Maseva edu anorekodha zvawo ruzivo ("Chikumbiro Chemhando yedata") chakagadzirwa nekushandisa kwako webhusaiti iyi. Yekushandisa Log Data inganganisira ruzivo rwakadai se IP yako kero, browser mhando, inoshanda system, iyo inoreva peji peji, mapeji yakashanyirwa, nzvimbo, yako yekutakura nhare, mudziyo uye sekushandisa ID, mazwi ekutsvaga, neruzivo rwekuda. Isu tinoshandisa ruzivo urwu kuongorora uye kuvandudza masevhisi edu. Kunze kwekunge zvataurwa muchikamu (Dziviriro Ye data), isu tinenge tichibvisa iyo Yekushandisa Log ye data kana kubvisa chero nhoroondo yedhijitari, senge zita rako rezita, yakazara IP kero, kana email kero, mushure memwedzi makumi mana nemasere.
Ruzivo rwedu rwemunhu rwatinounganidza rwunochengeterwa kwenguva yakareba kupfuura zvinodikanwa kuzadzisa zvinotaurwa muchikamu "KUSVANYA KUSVAKA UYE KUVIMBIRIRA" pamusoro kana kwenguva yakatarwa nemutemo kana mirau iyo Ezoic inosungirwa kutevedzera. Yako yedata yakashandiswa kuzadzikisa kusimbiswa kwemamwe marudzi emasevhisi akadai seS SSL chitupa, mubhadharo, uye kubhadharisa zvichachengetwa kwemakore mashoma mashanu zvichienderana nekirasi yezvakagadzirwa kana sevhisi uye inogona kuchengetwa muchimiro chemuviri kana chemagetsi. Kunyangwe kana iwe uchikumbira kudzimwa kana kukanganisa kwe data rako, isu tinogona kuchengetedza yako pachako data kusvika pazvinodiwa uye kwenguva yakareba zvakaringana kune edu epamutemo zvido zvebhizimisi kana kuita kwezvibvumirano zvisungo. Mushure menguva yekuchengeta yapera, Ezoic anochengetedza zvakachengeteka kana kusazivisa ruzivo rwako pachako kuitira kudzivirira kurasikirwa, kuba, kushandisa zvisirizvo, kana kuwana zvisingatenderwe.
KUSVIKIRA / KUSVIRA
Isu takaita marongero ekuchengetedza, mitemo uye zviyero zvekudzivirira izvo zvega data zvatave isu pasi pekutonga kubva: kusabvumidzwa kuwana zvisizvo kushandiswa kana kuburitsa zvisiri mvumo shanduko isiri pamutemo kuparadza kana kurasikirwa netsaona. Vese vashandi vedu uye data processors, avo vanokwanisa kuwana, uye vanobatana nekugadziriswa kwedata remunhu, vanosungirwa kuremekedza chakavanzika che data revashanyi vedu. Isu tinoona kuti yako pachako data haizotaurwe kune State masangano uye zviremera kunze kwekunge zvichidikanwa nemutemo kana imwe mvumo
Dhata DZINOGONA & DELETION
Une kodzero yekuona ruzivo rwatakatora nezvako uye kukumbira kubviswa kweruzivo rwedu rwevanhu rwatingave narwo. Unogona kushandisa iyi yedhata yekutarisa kupedzisa zviitwa izvi.
Pazasi pane chinyorwa chemakuki anowanzoiswa pane ino webhusaiti.
Pazasi pane runyorwa rwemashandisirwo, hunyanzvi uye tarisa metrics zvinowanzochengetwa uye kugadziriswa paunoshandisa iyi webhusaiti
Yako ruzivo ruzivo, kusanganisira nyika, nyika, guta, metro uye yeposita kodhi
Tsamba rewebhu rako raive pakutanga webhusaiti iyi
Mhando yebrowser iwe yaunoshandisa pamwe neshanduro
Iyo mhando uye inoshanda sisitimu yako
Ndeipi nguva yenguva iwe yauri uye inguvai iripo
Ndeapi mapeji pane ino saiti yaunoshanyira
Maitiro aunobata nawo iyi webhusaiti, kusanganisira nguva inoshandiswa, yakawanda sei yaunodhonza uye yako kufamba kwegunduru
Ukuru hwezviratidziro zvako uye hukuru hwe browser pane iyo skrini
Izvo zvemukati zvaunogovana pane peji
Kana iwe uchikopa uye unamidza zvirimo pane ino webhusaiti
Ndeipi ad kana yekubatanidza iwe yawakabiridzira kuti usvike pane ino webhusaiti
Mhando yeinternet yekubatanidza iwe yaunoshandisa uye yako ISP kana sevhisi yekupa
Zvinotora nguva yakareba sei kuti zvemukati webhusaiti kuti uchinjiswe kubrowser yako, kurodha mubrowser yako uye upe
Mamiriro ekunze auri parizvino
Zera rako nehunhu
Your ad address
Id yakasarudzika id kuti tikwanise kukuziva
Ndewe kushambadza kupi iwe
nguvavuuidtime_ # Zvinotarisirwa Inoshandiswa nekambani yekuongorora uye yemunhu, Ezoic, kurekodha nguva yekushanya kwako kune ino webhusaiti kuitira kuti kushanya kwakasiyana kunogona kusiyaniswa kubva kune mumwe nemumwe. 2880 Maminitsi
wp-gadziriso- # Zvinotarisirwa Inochengetera zvigadziriso zvemushandisi wespress iyo yakapinda.
wp-postpass_ # Zvinotarisirwa Inoshandiswa neWordpress masaiti ezvekuchengetedza / zvekupinda zvinangwa
wordpress_sec_ # Zvinotarisirwa Inoshandiswa neWordpress masaiti ezvekuchengetedza.
wordpress_logged_in_ # Zvinotarisirwa Inoshandiswa neWordpress saiti kuziva mushandisi.
saizvozvovuuid_ # Zvinotarisirwa Inoshandiswa nekambani ye analytics uye yemunhu, Ezoic, kuratidza zvakasiyana kushanya newe kune ino webhusaiti. Inoshandiswa kune analytics uye kusarudzika kwechiitiko chako. 30 Maminitsi
wordpress_test_cookie Zvinotarisirwa WordPress inoisa cookie iyi kana iwe uchifamba uchienda kune peji rekupinda. Iyo cookie inoshandiswa kutarisa kana webhusaiti yako yakaiswa kubvumira, kana kuramba makuki.
wp-gadziriso-nguva- # Zvinotarisirwa Chengetedza iyo id yemushambadzi yemushambadzi iyo yakapinda mukati.
anoshanda_template :: # Zvinotarisirwa Inoshandiswa nekambani yekuongorora uye yemunhu, Ezoic, kuchengeta iyo template yauri kuona pane ino webhusaiti.
ez_pub_site Zvinotarisirwa Inoshandiswa nekambani ye analytics uye yemunhu, Ezoic, kuratidza chete saiti ine maficha eEzoic akagoneswa.
ezCMPCookieConsent Zvinotarisirwa Inoshandiswa nekambani ye analytics uye yemunhu, Ezoic, yekutevera kana mushandisi akabvuma kuki.
ez_rdr_count Zvinotarisirwa Inoshandiswa nekambani ye analytics uye yemunhu, Ezoic, kuongorora redirekitori
ez_rdr Zvinotarisirwa Inoshandiswa nekambani ye analytics uye yemunhu, Ezoic, kuongorora redirekitori.
__cfduid Zvinotarisirwa Inoshandiswa neyemukati network, Cloudflare, kuona yakavimbika webhu traffic.
ez_view_original_only Zvaunogona Kuchinja Inoshandiswa nekambani ye analytics uye yemunhu, Ezoic, kuratidza saiti yekutanga isina maficha aEzoic.
ez_view_optimized_only Zvaunogona Kuchinja Inoshandiswa nekambani ye analytics uye yemunhu, Ezoic, kuratidza saiti yakagadziridzwa ine maEzoic maficha.
ez_view_optimized_only Zvaunogona Kuchinja Inoshandiswa nekambani ye analytics uye yemunhu, Ezoic, kuratidza saiti yekutanga isina maficha aEzoic.
kumhanyisa_no_process Zvaunogona Kuchinja Inoshandiswa nekambani ye analytics uye yemunhu, Ezoic, kudzima saiti yekumhanyisa maficha emushandisi uyu.
hakurwi Zvaunogona Kuchinja Inoshandiswa nekambani ye analytics uye yemunhu, Ezoic, kubvumira uyu mushandisi kuti atarise zvimwe zvinomhanyisa saiti maficha.
ez_ad_position_version Zvaunogona Kuchinja Inoshandiswa nekambani yekuongorora uye yemunhu, Ezoic, kuona kana vachishandisa chigadzirwa cheAd Tester kune uyu mushandisi, inoshandiswa neAd Tester yekuwedzera.
ezpicker_showall Zvaunogona Kuchinja Inoshandiswa nekambani yekuongorora uye yemunhu, Ezoic, kuudza ezpicker app kuratidza vese varidzi venzvimbo.
ezpicker_nocache Zvaunogona Kuchinja Inoshandiswa nekambani yekuongorora uye yemunhu, Ezoic, kuudza ezpicker app kumhanya usingashandisi cache.
ezpicker Zvaunogona Kuchinja Inoshandiswa nekambani yekuongorora uye yemunhu, Ezoic, kuvhura ezpicker
SL_wptGlobTipTmp Zvaunogona Kuchinja
SL_GWPT_Show_Hide_tmp Zvaunogona Kuchinja
_ga Statistics Inoshandiswa kusiyanisa vashandisi neGoogle Analytics
AMP_ECID_EZOIC Statistics Inoshandiswa neyekushambadzira uye analytics kambani Ezoic yehuwandu pane iyo Inokurumidza Mapeji Mapeji
ezux_et_ # Statistics Inoshandiswa nekambani ye analytics uye yemunhu, Ezoic, kurekodha huwandu hwenguva hwawakaita nezvakawanikwa pawebhusaiti ino. Inoshandiswa kune analytics zvinangwa zvekuvandudza ruzivo rwevashandisi.
ezux_tos_ # Statistics Inoshandiswa nekambani yekuongorora uye yemunhu, Ezoic, kurekodha huwandu hwenguva yamakashandisa pawebhusaiti iyi.
ezopvc_ # Statistics Inoshandiswa nekambani yekuongorora uye yemunhu, Ezoic, kuchengeta nhamba yemapeji awakatarisa pane ino saiti muchirongwa ichi. 30 Maminitsi
ezoref_ # Statistics Inoshandiswa nekambani yekuongorora uye yemunhu, Ezoic, kuchengeta iyo inoreva domain (webhusaiti yawaimbove usati iwe unogona kuwana iyi webhusaiti). 120 Maminitsi
zvaadgid_ # Statistics Rekodhi id iyo kune yako zera uye jenda chikamu. Semuenzaniso, id 923 inogona kunge iri yevanhurume vari pakati pemakore makumi maviri kusvika makumi matatu ekuberekwa. 30 Maminitsi
zvaab_ # Statistics Inoshandiswa nekambani yekuongorora uye yemunhu, Ezoic, kupatsanura bvunzo dzakasiyana siyana uye kushanda kwayo. 120 Maminitsi
_gid Statistics Inoshandiswa kusiyanisa vashandisi neGoogle Analytics
_gat Statistics Inoshandiswa kusiyanisa vashandisi neGoogle Analytics
__qca Statistics Inounganidza isingazivikanwe dhata pane kushanya kwemushandisi kune webhusaiti, senge huwandu hwekushanya, avhareji yenguva yakashandiswa pawebhusaiti uye ndeapi mapeji akaiswa nechinangwa chekugadzira mishumo yekugadzirisa zvirimo webhusaiti.
ezCMPCCS Statistics Inoshandiswa nekambani ye analytics uye yemunhu, Ezoic, yekutevera kana mushandisi akabvuma kuwerengera makuki.
_gac_UA- # Statistics Inoshandiswa neGoogle Analytics yekutevera kwevashandisi.
ezux_lpl_ # Statistics Inoshandiswa nekambani yekuongorora uye yemunhu, Ezoic, kunyora nguva yawakatakura peji rekupedzisira pane ino webhusaiti.
ezuz_ifep_ # Statistics Inoshandiswa nekambani ye analytics uye yemunhu, Ezoic, kunyora kuti wakambobata nezviri papeji ino. Inoshandiswa kune analytics zvinangwa kuvandudza mushandisi ruzivo.
ezosuigenerisc Statistics Inoshandiswa nekambani ye analytics uye yemunhu, Ezoic, kukuzivisa iwe zvakasiyana pamawebhusaiti akasiyana paintaneti kuitira kuti ruzivo rwako ruitwe.
nezvimwevid_ # Statistics Inoshandiswa nekambani ye analytics uye yemunhu, Ezoic, kuratidza zvakasiyana kushanya newe kune ino webhusaiti. Inoshandiswa kune analytics uye kusarudzika kwechiitiko chako.
zvimweawingly_ # Statistics Inoshandiswa nekambani yeanorytics uye yemunhu, Ezoic, yekunyepera uye isingaonekwe basa rekuona.
ezouid_ # Statistics Inoshandiswa nekambani ye analytics uye yemunhu, Ezoic, kukuzivisa iwe wega mushanyi pane ino webhusaiti. Inoshandiswa kune analytics uye kusarudzika kwechiitiko chako.
ezosuigeneris Statistics Inoshandiswa nekambani ye analytics uye yemunhu, Ezoic, kukuzivisa iwe zvakasiyana pamawebhusaiti akasiyana paintaneti kuitira kuti ruzivo rwako ruitwe.
ezostid_ # Statistics Inoshandiswa nekambani yekuongorora uye yemunhu, Ezoic, kuyedza maitiro akasiyana uye kushanda uye kunyora kuti zvinhu zvipi zvinoshanda uye zvinowanikwa kwauri kuti uwane chiitiko chinowirirana.
ezds Statistics Inoshandiswa nekambani ye analytics uye yemunhu, Ezoic, kuchengetedza saizi yeiyo pixel yehwindo rako kubatsira kugadzirisa rako ruzivo uye kuona zvirimo kukodzera.
akadonbo Statistics Inoshandiswa nekambani ye analytics uye yemunhu, Ezoic, kuongorora kuti mangani mapeji akashanyirwa nemushandisi.
ez_recommended_pages Statistics Inoshandiswa nekambani ye analytics uye yemunhu, Ezoic, kuongorora vashandisi vanoshanyira kubva kune yakakurudzirwa mapeji widget.
ezouspvh Statistics Inoshandiswa nekambani ye analytics uye yemunhu, Ezoic, kuongorora kuti mangani mapeji akashanyirwa nemushandisi kubva pavakashanya kwekupedzisira.
ezouspva Statistics Inoshandiswa nekambani ye analytics uye yemunhu, Ezoic, kuongorora kuti mangani mapeji akashandiswa nemushandisi nguva dzese.
ezvev Statistics Inoshandiswa nekambani ye analytics uye yemunhu, Ezoic, yekutevera mapeji aya ayo akashandirwa nemushandi uyu.
nezvimwehw Statistics Inoshandiswa nekambani ye analytics uye yemunhu, Ezoic, kuchengeta saizi yeiyo pixel yebrowser yako kubatsira munhu kugadzirisa kwako uye kuziva zvirimo zvinokodzera.
__utma Statistics Inounganidza data panhamba dzekuti mushandisi akashanyira webhusaiti pamwe nemisi yekushanya kwekutanga uye ichangopfuura. Inoshandiswa neGoogle Analytics.
__utmz Statistics Inounganidza data kuti mushandisi anobva kupi, injini yekutsvaga yakashandiswa, chii chinongedzo chakadzvanywa uye izwi rekutsvaga raishandiswa. Inoshandiswa neGoogle Analytics.
__utmc Statistics Anonyoresa timestamp nenguva chaiyoiyo kana mushandisi achisiya webhusaiti. Inoshandiswa neGoogle Analytics kuverenga iyo nguva yekushanya kwewebsite.
_pk_id .. # Statistics Inoshandiswa naMatomo (Piwik) yekutarisa analytics, kuchengetedza yakasarudzika mushanyi ID.
_pk_ref .. # Statistics Inoshandiswa naMatomo (Piwik) yekutarisa analytics, kuchengetedza iyo saiti inoreva.
ezutm_ # Statistics Inoshandiswa nekambani ye analytics uye yemunhu, Ezoic, kuchengetedza rondedzero ye utm parameter yavanowana.
lp_ # Statistics
_gat_gtag_UA_ # Statistics Inoshandiswa neGoogle Analytics yekutevera kwevashandisi.
ezdg Marketing Inoshandiswa nekambani yeanorytics uye yemunhu, Ezoic, kuchengeta ruzivo rwemazita senge zera nehunhu.
_ym_uid Marketing Inoshandiswa neAd Ad Yandex Metrica kuziva vashandisi.
__gads Marketing Yakashandiswa kunyoresa izvo shambadziro zvakaratidzirwa kumushandisi.
_sm_au Marketing Inoshandiswa neGoogle Adwords kudzokorora kushambadzira kune vashandisi.
^ mp _ # _ musanganiswapanel $ Marketing Inoshandiswa neMixpanel.
Rondedzero yeVatengesi inogona kushandiswa pane ino webhusaiti
Dhata Rokushandisa Zvinangwa
Makuki anodiwa anobatsira kuita kuti webhusaiti ishandiswe nekugonesa mabasa ekutanga senge peji rekufamba uye kuwana nzvimbo dzakachengeteka dzewebsite. Webhusaiti haigone kushanda zvakanaka pasina makuki aya.
Makesi ekudaira anoita kuti webhusaiti yeuke ruzivo inochinja maratidziro anoita webhusaiti kana kutaridzika, senge mutauro wako waunofarira kana dunhu rauri mauri.
Matsamba emakuki anobatsira varidzi vewebsite kuti vanzwisise kuti vashanyi vanobatana sei nemawebhusaha nekuunganidza nekuzivisa ruzivo nekusazivikanwa.
Maketi amakuki anoshandiswa kutevedza vashanyi kune mawebhusaiti. Icho chinangwa ndechekuratidza kushambadzira kwakakodzera uye kushandira wega mushandisi uye ipapo kwakakosha kune vashambadziri uye wechitatu wevanoshambadzira.
Kana paine chero mibvunzo pamusoro peyakavanzika mutemo kana iwe uchida kuzvinyora kubva pane yedu saiti uye masevhisi iwe unogona kutibata nesu uchishandisa ruzivo rwuri pazasi kana kuti nyorera kwatiri pa:
Kana iwe uchida kuona pfupiso yezvikumbiro kuti uzive ruzivo rwevashandisi, zvikumbiro zvekudzima ruzivo rwevashandisi uye zvikumbiro kusarudza kubuda kweccpa kutevedzera iyo bhizinesi iri rakagamuchira: